यस्ता रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? दुधमा लसुन मिलाएर पिउँनुहोस् – Khabaarpati
यस्ता रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? दुधमा लसुन मिलाएर पिउँनुहोस्
January 3, 2021 January 3, 2021 goodmamLeaveaComment on यस्ता रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? दुधमा लसुन मिलाएर पिउँनुहोस्
काठमाडौँ । स्वास्थ्यको लागि दुध पोशाक तत्व हो। बालक देखि वृद्ध सम्मलाई शक्ति र रोगबाट मुक्तिको लागि दुध पिउनु आवश्यक हुन्छ।विभिन्न रोगले ग्रसित भएको अवस्थामा समेत रोगमा केही घरेलु चिज मिलाएर त्यसलाई औषधिको रुपमा पिउन सकिन्छ।अन्य औषधिले रोग हटाएतापनि शरीरको शक्ति कम गरिदिन्छन् भने दुधको मिश्रणले शरीरको शक्ति समेत बढाइदिन्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
दुधमा लसुन झट्ट सुन्दा नमिल्दो सुनिन्छ । तर दुध र लसुनको मिश्रणले धेरै रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।यसको लागि एक गिलासमा दुधमा तीन वटा केस्रा लसुनको आवश्यकता पर्छ । लसुनलाई केलाएर सानो सानो टुक्रामा काट्नुपर्छ।अब एउटा भाँडोमा दुध तताउन बसाल्नुपर्छ र दुधमा ती लसुनका टुक्रा राख्नुपर्छ । लसुनका टुक्रा राखिसकेपछि दुधलाई केही छिन उम्लिन दिनुपर्छ । यसो गर्दा लसुनमा भएको तत्व निस्किन्छ र त्यो दुधमा मिल्छ।
लसुन राखिएको दुधलाई केही समय उमालिसकेपछी त्यसलाई छानेर गिलासमा राख्नुपर्छ । लसुनका टुक्रा भने गुलेका हुँदैनन्।आफ्नो इच्छा अनुसार, ती लसुनका टुक्रालाई यत्तिकै चपाएर खाँदा पनि त्यसले फाइदा गर्छ । इच्छा नभएमा नखान पनि सकिन्छ। गिलासमा राखिएको दुधलाई मनतातो भएपछी पिउनुपर्छ।
लसुन मिश्रित यो दुधले कोलेस्ट्रोलको समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई फाइदा गर्छ। रगतलाई पातलो बनाइदिन्छ। यसले पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्छ । ग्यास्ट्रिक तथा कब्जियत जस्ता समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ।सामान्य टाउको दुखाइ देखि माइग्रेन रोग सम्मको लागि यो दुधले औषधिको काम गर्छ। यसको लागि राती यो लसुन मिश्रित दुध पिएर सुत्न सकिन्छ। साथै यो दुधले हाडजोर्नीको दुखाइबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
व्यक्तिलाई यसकारणले हुने गर्दछ रक्तअल्पताको जोखीम, नखानुहोस् यस्तो चिज नत्र होला एनिमिया !
मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ ? शरिरका यी ५ भाग नियमित दबाउनुहोस्
उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, निम्त्याउँछ यस्तो खतरा !
यस्तोे पानीले २४ घण्टामै निकाल्दिन्छ कलेजोमा जमेको सबै फोहोर, हुन्छ सबै बिमारी खतम
March 31, 2021 goodmam
होटलको टिस्यु पेपरमा ‘मेरो दुई वर्ष अघि नै विवाह भएको हो’ भन्ने नोट लेखेर हनिमुन मनाउन होटल लगेकी बेहुली गायब October 16, 2021